I-Ariel ithembisa i-supercar yombane ene-1.180 CV yamandla | Iindaba zeGajethi
UAriel uthembisa i-supercar yombane ene-1.180 hp yamandla
Asazi ukuba ukwazile ukubona iividiyo zokukhawulezisa izithuthi ezahlukeneyo zeTesla. Ukuba uyakwenza oko, uyakubona ukuba abahlali bathanda njani ukunika isantya kukunyusa kunye nokunyanzela ukuba batyhale iimoto zombane. Ngoku, kwaye ukuba siyakuxelela ukuba inkampani yaseBritane iAriel yakha i-supercar (HIPERCAR njengoko beyibiza njalo), ithembisa imoto yombane ngaphandle kwesiqhelo: I-1.180 CV yamandla kunye nesantya esiphezulu esidlula kwi-250 km / h.
IHIPERCAR yindlela esaziwa ngayo isithuthi, nangona igama lorhwebo eliza kunikwa imveliso yokugqibela lingekagqitywa (i-Elektron ihletywa). Inyanga ezayo ye Ngo-Septemba ufuna ukubonisa umbono wokuqala osekwe kwi-carbon fiber. Nangona kungayi kuba kude kube ngu-2019 xa imodeli yokugqibela iboniswa. Kwaye ukuveliswa kwayo ngobuninzi kuya kuba ngonyaka we-2020. Ixabiso okwangoku alaziwa. Kodwa akuyi kubakho imodeli enye, kodwa zimbini: iidrive drive enye kunye nelinye elingasemva-wheel drive.
I-HIPERCAR enevili lonke iya kuba yeyona inamandla, nge I-torque eyi-1.800 NM. Idatha enikezelwa yinkampani ngokwayo yile ilandelayo:
0 - 60 mph - 100 km / h - 2.4 imizuzwana
0 - 100 mph - 161 km / h - 3.8 imizuzwana
0 - 150 mph - 241 km / h - 7.8 imizuzwana
Esona santya siphezulu: 160 mph - 257 km / h
Le HIPERCAR iya kuxhotyiswa nge-lithium ibhetri engama-42 okanye engama-56 kWh. Nangona I-35 kW yokuvelisa umbane -Kwaye iphenjelelwa yipetroli- eya kuvumela amandla ombane wombane. Ngale ndlela, ukuzimela kwayo kuya kwandiswa nangakumbi (inani elingakhange lichazwe).
Ngakolunye uhlangothi, enye imodeli yokuqhuba i-wheel-wheel iya kuba neenombolo ezithobekileyo. yakhe Injini iya kuba ne-590 hp yamandla kunye ne-torque ye-900 Nm. Zingaphi iimoto zemidlalo ezinokufuna loo mandla phantsi kwehood yazo? I-aluminium chassis yayo; umzimba wayo wekhabhoni; kunye neevili zekhabhoni ezinamavili asezantsi kwi-intshi ezingama-20 ngaphambili kunye nobukhulu obungange-intshi ezingama-21 buya kuzisa ixabiso elimalunga nesigidi esi-1.
Iinkcukacha ezithe vetshe: ariel
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba zeGajethi » ngokubanzi » Izaziso » UAriel uthembisa i-supercar yombane ene-1.180 hp yamandla
Ukhuseleko usebenzisa iikhamera ze-IP? Esi sesona sipho silungileyo salo mzuzu